Khashoggi: Gabadhi u doonneyd oo didday cafis ay qoyska u fidiyeen dilaaga – Radio Damal
Haweeneydi u doonneyd wariyihi Sacuudiga ee la dilay Jamaal Khashoggi ayaa sheegtay: “Iney cidna xaq u lahayn iney cafiso dilaaga”, kaddib marki uu wiil uu Khaashuqji dhalay sheegay iney dilaaga aabbahood ay cafiyeen.
Khashoggi oo si weyn u dhaleeceyn jiray dowladda Sacuudiga ayaa 2018-kii lagu dilay gudaha qunsuliyadda Istaanbuul uu Sacuudiga ku leeyahay.
Khashoggi ayaa maqaallo ku qori jiray wargeyska Washington Post isaga oo geeridiisa ka hor ku noolaa dalka Mareykanka.
Marki la waayey Khashoggi kaddib, waxay madaxda Sacuudigu sheegeen, iney Khashoggi ay dilka u geysteen koox loo abaabulay iney Khaashuqji Sacuudiga ku soo celiyaan.
2019-kii bishi December, maxkamad ku taallo Sacuudiga ayaa shan qof oo aan magacdooda la shaacinin ku ridday xukun dil ah iyada oo raggaasi ay maxkamadda ku eedeysay iney door ku lahaayeen dilka loo geystay Khashoggi.
Maxay tiri haweeneydi u doonneyd Khashoggi?
Jimcihi, waxay Hatice Cengiz boggeeda Twitterka ay ku qortay Jamaal Khashoggi “inuu yahay qof astaan u ah caalamka oo dhammaanteen naga sumcad badan, laguna faano lana jecel yahay.”
Midda koobaad, waa wararka ay sida weyn isula dhex marayaan warbaahinta dowladda Sacuudiga, oo ay ku sheegayaan qoyska Khashoggi iney dilaaga ay cafiyeen. Iyada oo la sheegay inuu cafiska qoyska uu ku dhawaaqay Salah oo ah wiil uu dhalay Khashoggi, ee la duubay isaga oo uu u tacsiyeynayo dhaxlasuagaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo looga shaki qabo inuu dilka Khashoggi uu ka dambeeyey.
Sida ay uga hortmid gabadhi u doonneyd Khashoggi iyo Wakiilka qaramada midoobay codsiga ay soo jeedisay ee ah in baaritaan madax bannaan dilkan lagu sameeyo inuu Sacuudiga wax qarinayo. Waxayna aaminsan yihiin weli in dilka Khashoggi loo baahan yahay inuu caddaalad helo.
Warbaahinta Sacuudigana waxay ahimiyad gaar ah siiyaan oo dilka Khashoggi uga muhiimsan cudurka safmarka ee ka coronavirus ee dalkaasi ka dillaacay iyo dakhliga saliidda ka soo galayey ee hoos u dhacay.
Wiilka uu dhalay Khashoggi muxuu yiri?
Mar sii horreysay, wiil uu dhalay saxafigii la dilay ee Sucuudiga u dhashay Jamaal Khashoggi ayaa sheegay inay cafiyeen dadkii ka dambeeyay dilka aabihiis.
“Haddii aan nahay wiilasha Jamal Khashoggi waxaan shaaca ka qaadeynaa in aan cafinnay kuwo dilay aabahee si ilaahey uu abaal marin inoogu baddalo.”
Sanadki horana wargeyska Washington Post wuxuu qoray qoyska Khashoggi iney magdhaw isugu jira guri iyo lacag ay ka guddoomeen boqortooyada Sacuudiga.
Balse Saalah Khashoggi oo ah curadka Khashoggi, oo ah ninka keli ah ee qoyska Khashoggi ka jooga Sacuudi Carabiya sida uu wargeysku qoray.
Jamaal Khashoggi maxaa ku dhacay?
Wariye Jamaal Khashoggi wuxuu musaafiris iskii ah uu tani iyo 2017-kii ugu maqnaa dalka Mareykanka, ilaa uu 2-dii Oktoobar ee 2018-ka uu qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul uu u soo doontay dukumantiyo uu u baahnaa oo lagu xiray guurka gabadhi u doonneyd Hatice Cengiz.
Mas’uuliyiinta Sacuudiga waxay in mudda ah ku doodayeen inuu dhismaha qunsuliyadda uu ka baxay isaga oo nabad qaba iyaga oo marar badan bedbeddelay hadallada ka soo baxaya Sacuudiga toddobaadyo kaddib marki Khashoggi la waayey.
Faahfaahinnada ka soo baxaya dilka Khashoggi loo geystay caalamka oo dhan ayaa la anfariiray iyada oo madaxda ugu sarreysa Sacuudiga oo uu dhaxal sugaha boqortooyada ka mid yahay dilka lala xiriiriyey.